कपाल झर्ने समस्याबाट मुक्त हुन डिटोक्स गर्नुहोस् | Kathmandu Pati Kathmandu Pati
प्रकाशित मिति : २०७८, १३ चैत्र आईतवार १४:२३
काठमाण्डु – शरीरलाई स्वस्थ राख्नका लागि मानिसहरु कहिले पौष्टिक आहारको सहारा लिने गर्छन् भने कहिले डिटोक्स वाटर । तर के तपाईलाई थाहा छ ? तपाईको शरीर जस्तै तपाईको कपाललाई पनि स्वस्थ रहन हेयर डिटोक्स चाहिन्छ ।
कपालको नियमित हेरचाह गर्दा पनि कतिपय महिलाले कपाल झर्ने, कपाल सुख्खा हुने वा डन्डीफोर हुने गुनासो गर्छन् । जसले गर्दा कपाल पातलो सुक्खा हुन जान्छ । कपाल डिटोक्स गरेर यी सबै समस्या सजिलै हटाउन सकिन्छ । आउनुहोस् जानौं कपाल झर्नबाट जोगाउन कसरी आफ्नो कपाल डिटोक्स गर्ने ।
वास्तवमा, नियमित रूपमा कपाल धुँदा पनि टाउकोमा फोहोर, तेल, पसिना जम्छ, जसले पछि कपाललाई तैलीय बनाउँछ । जसका कारण कपालमा डन्डीफोर र चिलाउने जस्ता समस्या हुन थाल्छ । यसबाट बच्न टाउकोको छालालाई डिटक्सिफिकेसन गर्नुपर्छ । यसले टाउकोको गहिरो सफा गरेर कपालको समस्या कम गर्न मद्दत गर्छ ।
हेयर डिटोक्स भनेको के हो ?
टाउकोको गहिरो सफा गर्ने प्रक्रियालाई हेयर डिटोक्स भनिन्छ । हेयर डिटोक्स गर्दा स्याम्पु र स्क्याल्प स्क्रबको मद्दतले कपालको गहिरो क्लिन्जिङ गरिन्छ । यति मात्र होइन, यसले स्टाइलिङ उपकरणका कारण कपाललाई हुने क्षतिलाई पनि रोक्छ। यसबाहेक, यसले व्यक्तिको टाउकोलाई सास फेर्न मद्दत गरेर कपालको वृद्धिलाई बढावा दिन्छ ।
स्पष्ट शैम्पूको प्रयोग
कपाल डिटक्सको लागि सधैं क्ल्यारिफाइ शैम्पू प्रयोग गर्नुहोस्। यसले तपाईको टाउकोमा रहेको सबै प्रकारको फोहोर हटाउनुका साथै कपालको फोलिकल्स खोल्न मद्दत गर्छ ।
स्क्याल्प स्क्रबको प्रयोग
कपाल डिटक्स गर्दा, ध्यान राख्नुहोस् कि तपाईंले महिनामा कम्तिमा एक पटक स्क्याल्प स्क्रब प्रयोग गर्नुपर्छ । यसले कपालको फोलिकल्स वरपरको फोहोर र कपाल उत्पादनहरू हटाउन मद्दत गर्दछ । जसले कपाल बढ्न रोक्छ र कपाल झर्छ ।
लन्डन – दमबाट पुरुषको तुलनामा महिलामा मृत्युको सम्भावना दोब्बर रहेको
खेर जाने अवस्थामा कोडिभ-१९ विरुद्धको खोप, छैन कुनै हिसाब
काठमाण्डु – केही दिन अगाडि जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाण्डुमा केही थान
घरमा नै सुरक्षित गर्भपतन सेवा : सेवाग्राहीलाई जानकारी नै छैन
काठमाण्डु – आवश्यक सूचना तथा जानकारीको अभावमा सुरक्षित गर्भपतन तथा